Mhinduro yedu kuCovid-19 (coronavirus) | KarmanHealthcare.com
COVID-19: Maitiro edu
Kana zvasvika pa COVID-19, tinoda kuti iwe uzive isu takazvipira kuchengetedza vashandi vedu nenharaunda zvakachengeteka - uye kutarisira zvakanaka vatengi vedu.
Hezvino izvo zvatiri kuita kuve nechokwadi chekuchengetedza kwevashandi vedu nevatengi:
Tiri kutsigira vashandi mukushanda kubva kumba chero pazvinogoneka. Neraki, isu takave nekuenderera kwebhizinesi uye kushanda-kubva-kumba system munzvimbo kwechinguva - saka nyanzvi yako yechigadzirwa maneja anogona kunge ari kutaura newe iwe wakachengeteka kumba nemhuri yavo.
Isu tashandura kutarisisa kwekufambiswa kwebasa kuenda kunzvimbo yedu yekuparadzira yeLos Angeles kure nevazhinji vatinoshanda navo munyika yese, kusanganisira kudzidzira kusimukira munharaunda kuburikidza nekubatanidzwa kwemaawa akadzedzereka uye shanduko yekushandira.
Isu takawedzera hutsanana uye hutsanana zvirevo zvichiri kumberi kune vashandi vari kurongedza nekutumira zvaunotenga.
Izvi zvinosanganisira, masiki, magurovhosi, doro, zvinopukuta, uye zvimwe zvakawanda zvigadzirwa zvehutsanana.
Isu takadzorera kwenguva pfupi mabhodhoro ekuparadzira kure nemamwe emitambo yedu yechinyakare tichisara kufambidzana nefoni uye internet kune vatengi vedu vemuno. Uyezve, vatengi ivavo vava nesarudzo ye "yakananga imba yekuchengetera & zuva rimwe chete rekutumira" kune zvinhu zvatinoisa munzvimbo yedu yekuparadzira Los Angeles. Kana iwe usingakwanise kuiwana nekukurumidza kuburikidza neyedu network yevatengesi, tifonere isu ipapo! Izvo zvakakosha kuti isu tikupe iwe mhinduro uye kuti chako chekurapa chiendeswe kunze zuva rimwe chetero. Tiri pano nekuda kwako.
Isu takanyatso shanda nemahombe makuru ekutakura akadai se FEDEX uye kupota kune imwecheteyo tora uye kukurumidza kuendesa.
Vanhu vane chero zviratidzo zvekurwara vanogona kusapinda munzvimbo dzedu. Tiri kutevera CDC nhungamiro yekunonoka kudzokera kubasa mushure mechero rudzi rwehurwere.
Kune vatinoshanda navo vanofanirwa kutarisisa pakuchengeteka kwavo - kana kuchengetedzeka kwemhuri dzavo - takagadzirira kuita izvo zvinotora kuti vave nechokwadi chekuti havapotse mubhadharo.
Tagara tichifunga nezvazvo Karman senzvimbo inonakidza yekuti iwe utandare, dzidza nezvazvo, uye zvitengese mavhiripu. Waizviziva here? Isu tinotora chikamu muketani rekurapa nezvakawanda kupfuura zvinongodiwa zvakanyanya kufamba midziyo isu tave tichizivikanwa mukati memakore ese? Parizvino, isu tinofunga isu tichiri kukwanisa kukupa izvo zvakanaka zviitiko, uku tichitsigira vashandi vedu mukuita zvakanakira ivo nemhuri dzavo. (Kana pane chero nguva inoshanduka, isu tinoshandura maitiro edu uye ndokuzivisa iwe nezvazvo pano.)
Oo, uye chimwezve chinhu: ndapota usakanganwa nezve simba re kufamba kune avo vanochida zvakanyanya munguva ino yezvinodiwa zvekurapa munyika yese. Dzidza nezve akanakisa maitiro ekurapa. Dzidza nezvesarudzo dzakanakisisa dzekugona kurapwa pane zvaunoda pakurapa nhasi. Tinofunga iwe uchafara iwe zvawakaita.
The Karman Chikwata *** Kushumira Vatengi Vedu Nyika Munyika kweanopfuura makore makumi maviri nemaviri ***